केटि मान्छेहरु कस्ता केटाहरुलाइ मन पराउछन् ? केटाहरुले अवश्य पढ्नुहोला….. – List Khabar
Home / रोचक / केटि मान्छेहरु कस्ता केटाहरुलाइ मन पराउछन् ? केटाहरुले अवश्य पढ्नुहोला…..
केटि मान्छेहरु कस्ता केटाहरुलाइ मन पराउछन् ? केटाहरुले अवश्य पढ्नुहोला…..
admin December 31, 2021 रोचक Leaveacomment 112 Views
हरेक केटिलाइ फरक फरक प्रकारका केटाहरु मन पर्छन। केटीहरु केटामा यस्ता गुणहरु खोज्छन जसमा उनीहरु प्रति इमान्दारी र बफादारी मिलोस। कुनै पनि सम्बन्धमा यो जरुरि हुन्छ कि, त्यहाँ एकअर्का बीच सम्मानको साथमा एकअर्काको गुणहरु प्रति आकर्षण पनि होस्। आउनुहोस जानौ केटाहरुका यस्ता गुणका बारेमा जसले केटि मान्छेलाई आकर्षिसंवेदनशील हुनु : महिला र केटीहरूलाइ केटा मान्छेको संवेदनशीलता धेरै मन पर्छ। उनीहरु आफ्नो जीवन साथीमा एक संवेदनशील व्यक्ति फेला पार्न चाहन्छन। केटीहरू विश्वास गर्छन् कि सम्बेदनशील केटाहरु दिलका साफ हुन्छन् अनि असल जीवन साथि सावित हुन्छन।
जो अरुको भावाना प्रति सम्बेनशील हुन्छन् ति मान्छे असल व्यक्ति हुनुका साथै एक पूर्ण जीवन साथि हुने कुरा निश्चित प्राय हुन्छ।राम्रो सेन्स अफ ह्युमर : केटिहरुलाई राम्रो सेन्स अफ ह्युमर भएको केटा मन पर्छ। किनकि यस्ता केटाहरु आफु खुशी हुनुका साथै आफ्ना ओरिपरिका मान्छे हरुलाई पनि खुशी राख्ने सामर्थ्य राख्छन। जुनसुकै माहोलमा पनि यस्ता मान्छे आकर्षणको केन्द्र हुने गर्छन्।
हरेक केटि मान्छे चाहान्छन कि आफ्नो जीवन साथि, आफ्नो परिवार वा साथि भाइ जम्मा भएको ठाउँमा आकर्षणको केन्द्र बनोस्। सबैले उसलाई मन पराइदिउन्। उसको तारिफ गरिदिउन्। यस्तो हुनका लागि, ऊ संग राम्रो सेन्स अफ ह्युमर हुन जरुरि हुने गर्छ। यसैले केटीहरु केटामा सम्बेदनशीलता पछी राम्रो सेन्स अफ ह्युमर जरुर खोज्छन।
सहयोगी बानि भएका : केटीहरुलाई यस्ता केटा मन पर्छन जो सहयोगी स्वभावका हुन्छन। त्यस्ता पुरुषहरूले महिलाहरूलाई कसरी आदर गर्ने भनेर जान्दछन् र उनिहरूलाई सहयोग गर्न कहिले पछाडि हुँदैनन्। सहयोगी बानि सबैलाई मन पर्छ। सहयोगी मान्छेको साथ रहन सहज हुने गर्छ। तिनीहरु संग जीवन बिताउन धेरै सरल हुन्छ। जसले घर ब्यबहार देखि लिएर सम्पूर्ण अफ्ठेरो हरुमा आफ्नो पार्टनरको साथ् दिन्छन।
सहयोगी स्वभाव भएको पतिले पत्नीलाई घरका काममा सघाउने गर्छ। यस्तो हुँदा पत्नीलाई घर चलाउन सहज हुने गर्छ। सहयोगी भावाना नभएका मान्छेले कहिल्यै अरुको दुख देखदैनन। देखे पनि उसलाई सहयोग गर्नु पर्छ भन्ने सोच्दैनन्, यस्तो भयो भने त्यस्तो मान्छे संग जीवन बिताउन कस्टकर हुनेगर्छ। यहि कारणले केटीहरु सहयोगी स्वभावका केटा मान्छेलाई मन पराउछन्। त गर्छन्।
Previous जब भखरै बिहे गरेकी नवबिबाहित दुलहीले सोच्नै नसक्ने कार्य गरेपछि सबै चकित परे !
Next यस्तो छ तपाईको शनिवारको भाग्य! पौष १७ गतेको राशिफल हेर्नुहोस्